अय्यूब 26 ERV-NE - अय्यूबले - Bible Gateway
अय्यूब 26 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
अय्यूबले बिल्ददलाई जवाफ दिंदछ
26 तब अय्यूबले जवाफ दिएः
2 “बिल्दद, यस थकित अनि उदास मानिसलाई तिमीले साँच्चि नै ठूलो सहयोग गर्यौ।
के तिमी साँच्चै सोच्छौ कि तिमीले त्यो मानिसलाई,
जसको बहुबलमा केही शक्ति छोडिएको छैन त्यसलाई बचाएका छौ?
3 तिम्रो परार्मश त्यस मानिसको लागि हो जसको ज्ञान छैन।
के तिमीले धेरै अर्न्तज्ञान हासिल गरेकाछौ भनी सोच्छौ?
4 कसले तिमीहरूलाई यस्ता कुराहरू भन्न सहयोग गर्यो?
कसको आत्माले तिमीलाई उत्साह प्रदान गर्यो?
5 “मरेकाहरूका आत्माहरू
डरले पृथ्वी मुनि पनि काम्दछ।
6 तर परमेश्वरले त्यो मृतलोक भित्र देख्न सक्नुहुन्छ।
मृत्यु परमेश्वर देखि लुक्न सकेको छैन।
7 परमेश्वर उत्तर आकाशको शुन्य अन्तरिक्षमा लम्पसार हुनुभयो।
परमेश्वरले पृथ्वीलाई शुन्यतामा झुण्ड्याउनु भयो।
8 परमेश्वरले पानीलाई बाक्लो बादलहरूले छोप्नु हुन्छ।
तर परमेश्वरले त्यो गह्रुँङ्गो चीजले बादलहरू फुटाउनु हुन्न।
9 परमेश्वरले पूर्णिमाको चन्द्रमालाई छोपी दिनुहुन्छ।
उहाँले आफ्नो बादलहरू त्यसतर्फ फैलाउनु हुन्छ अनि त्यस माथि लुकाउनु हुन्छ।
10 जहाँ अँध्यारो र उज्यालोको सङ्गम हुन्छ
त्यहाँ परमेश्वरले क्षितिज जस्तै परिधि कोर्नु भयो।
11 आकाशलाई थामी राख्ने आधारहरू डरले काम्छ
जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ।
12 परमेश्वरको शक्तिले समुद्र शान्त हुन्छ।
परमेश्वरको ज्ञानले राहाबलाई नष्ट पार्नु भयो।
13 परमेश्वरको स्वासले आकाश सफा हुन्छ।
परमेश्वरको हातले भाग्न तयार भएका सर्पलाई नाश गरिदिनु हुन्छ।
14 यी परमेश्वरले गर्नु भएको अचम्मका केही कुराहरू मात्र हुन।
हामी परमेश्वरले गर्नु भएको कानेखुशी मात्र सुन्छौं।
परमेश्वर कति महान र शाक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर,
कसैले पनि वास्तविक रूपमा बुझ्न सक्तैन।”